बलिउड २०१८- कम आँकिए पनि बक्स-अफिसमा चम्किए यी ५ फिल्म
कला/साहित्यमंगलबार, १० पौष , २०७५
परम्परागत लिकबाट हटेर बनेका यी फिल्महरुले बक्स-अफिसमा लामो समय राज गरे। बलिउड यस वर्ष अनुमान गरेभन्दा अप्रत्याशित रह्यो। शाहरुख खानको 'जिरो', आमिर खानको 'ठग्स अफ हिन्दोस्तान', अक्षय कुमारको 'प्याडम्यान' जस्ता फिल्मले दर्शकलाई निराश बनाए। कतिपय फिल्मले आफ्नो बजेट समेत असुल गर्न सकेनन्।
२०१८ मा आएका पाँच फिल्महरु यी हुन्, जसको कमाइले फिल्म उद्योगलाई चमत्कृत पार्‍यो।
२०१८ मा आयुष्मान खुरानाका दुई फिल्म रिलिज भए, दुवै सुपरहिट साबित भए। कम लगानीका र नौला किसिमका फिल्ममा काम गरेर उनले आफ्नो फरक खालका दर्शक कमाएका छन्। श्रीराम राघवनको निर्देशनमा क्राइम सस्पेन्स थ्रिलर जनरामा बनेको फिल्म हो, 'अन्धाधुन'। आयुष्मानसँगै राधिका आप्टे र तब्बू प्रमुख भूमिकामा देखिएको फिल्मले भारतमा ७४ करोडसहित विश्वभरबाट भारु १०५ करोड ९५ लाख कमाएको थियो। फिल्मको बजेट भारु २०/२५ करोड थियो।
२. बधाई हो
अमित शर्माको निर्देशनमा बनेको 'बधाई हो' आयुष्मान खुरानाको २०१८ को चर्चित फिल्म बन्यो। करीब भारु २० करोडमा बनेको फिल्मले भारतमा १३७ करोड ५४ लाख कमायो भने विश्वव्यापी रूपमा भारु २२१ करोड ३५ लाख कमाएको आँकडा छ। दर्शकले फिल्म यति धेरै रुचाउलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन। फिल्ममा आयुष्मानका साथै नीना गुप्ता, गजराज राव, सान्या मल्होत्रा र सुरेखा सीकरीको अभिनय छ।
राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर र पंकज त्रिपाठी अभिनीत हरर कमेडी फिल्म 'स्त्री' ले पनि लगानीको तुलनामा राम्रो कमाइ गर्‍यो। अमर कौशिकले निर्देशन गरेको फिल्मले भारतीय बक्स-अफिसमा १२९ करोड ९० लाख कमायो। भारु ३० करोडको बजेटमा बनेको फिल्म २०१८ मा १०० करोड कमाउने नवौं फिल्म साबित भयो। फिल्मले भारतसहित विश्वव्यापी रूपमा १८० करोड ७६ लाख बटुल्यो।
४. सोनू के टीटू की स्वीटी
लव रञ्जन निर्देशित फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' को बक्स-अफिस कमाइले बलिउडका व्यापार विश्लेषकहरुलाई हैरान पार्‍यो। करीब २४ करोड बजेटमा बनेको यो फिल्म एक सय करोड क्लबमा प्रवेश गरेको थियो। भारतीय बक्स-अफिसमा फिल्मले १०८ करोड ९५ लाख कमाएको थियो। फिल्ममा कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा, सन्नी निजार प्रमुख भूमिकामा थिए।
२०१८ को सफल फिल्ममा टाइगर श्राफ र दिशा पटानी अभिनीत 'बागी-२' पनि पर्छ। अहमद खानको निर्देशनमा बनेको यो एक्शन फिल्मले कमाइको नयाँ कीर्तिमान बनाउला भन्ने कसैको अनुमान थिएन। भारु ७५ करोडमा बनेको यस फिल्मले भारतमा मात्रै १६४ करोड ३८ लाख कमायो भने विश्वभरिमा २५४ करोड ३३ लाख बटुल्यो। रिलिजको दिन २५ करोड कमाउँदै बागी-२ यस वर्ष उत्कृष्ट ओपनिङ गर्ने पाँचौं फिल्म बन्न सफल भयो। एजेन्सी